Mgbanwe ihu igwe ga-emetụta obodo karịa ime obodo | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Mgbanwe ihu igwe, Ebili mmiri ọkụ
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta dịgasị iche iche n’ebe dị iche iche. Dịka mgbanwe ndị a na mmetụta dịgasị iche na nnukwu ma ọ bụ site na elu / latitude na ụwa. N’ozuzu, mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta nke okpomọkụ na-abawanye, mana mmụba a agaghị adị otu ebe niile.
Dị ka otu nnyocha si kwuo, mmụba nke okpomọkụ ga-emetụta obodo karịa karịa gburugburu ebe obibi na nke ahụ, ọ bụrụ na mmụba ugbu a na-aga n'ihu, mmetụta nke ebili mmiri na-ekpo ọkụ na obodo nwere ike ịba ụba site na anọ. Want chọrọ ịmatakwu banyere nyocha a?
1 Mmetụta nke ịrị elu okpomọkụ
2 Ihe si na okpomoku uwa n’uwa
3 Ọdịnihu dị n'ihu
Mmetụta nke ịrị elu okpomọkụ
Ọmụmụ ihe banyere etu okpomọkụ ga-esi emetụta obodo na gburugburu ebe obibi ka Mahadum Leuven (Belgium) mere ma ha nwere nkwubi okwu siri ike nke ha gosipụtara na nzukọ European Union of Geosciences nwere na Vienna.
Otu n'ime ndị isi edemede nke nyocha a na-akpọ Hendrik wouters ekwuola na mmetụta ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ ga-adị njọ okpukpu abụọ na obodo ukwu dị ka mpaghara okike.
A maraworị site na nyocha gara aga na mmetụta nke okpomọkụ dị elu karịa na obodo karịa na mpaghara ime obodo. Karịsịa n'abalị enwere mmetụta "agwaetiti ọkụ", nke bụ ịrị elu nke ikuku na-ekpo ọkụ tọrọ atọ n'okporo ụzọ na asphalt, na-akpata mmụba na okpomọkụ. Kedu ihe na-eme ka ọmụmụ ihe a bụrụ mgbanwe bụ ịkọpụta maka oge izizi etu obodo ga-ekpo ọkụ dị elu karịa.
Ihe si na okpomoku uwa n’uwa
Enwere ọmụmụ ihe na-egosi na ebili mmiri na-arịwanye elu na obodo ukwu, ma na oge na ike. Site na ebili ọkụ, nnabata ụlọ ọgwụ n'ihi mmịrị akpịrị ịkpọ nkụ, arụpụtaghị ihe, mmebi nke akụrụngwa na-abawanye na n'ọnọdụ kachasị njọ, ikpe ọnwụ na-abawanye.
N'ime ọmụmụ ihe a, ndị nyocha emeela nyocha etu esi emetụta ebili mmiri na-emekọrịta n'obodo na gburugburu okike. Iji mee nke a, ha ejirila ọnụọgụ okpomọkụ si na 35 gara aga na Belgium ma jiri ya tụnyere ugboro na ike nke oke okpomọkụ gafere. Ihe mgbochi ndị a na-egosi mmebi nke na-akpata ma ahụike ma ihe niile a kpọtụrụ aha n’elu.
N'ihi ya, enwere ike ịhụ na n'oge oge a na-amụ ihe, ebili ọkụ na-esiwanye ike n'obodo ukwu karịa n'ime obodo. A na-atụ anya na nke a ga-akawanye njọ n'ọdịnihu.
Ọdịnihu dị n'ihu
Ozugbo ha nwetara nkwubi okwu nke nyocha ndị ahụ, ha ewepụtawo onwe ha na ịkọ atụmatụ banyere ihe ga-eme n’ọdịnihu. Atụmatụ na-adabere na mgbatị emere site na ụdị kọmputa. Atụmatụ ndị a buru amụma na maka oge 2041-2075, mmetụta nke okpomọkụ na obodo ọ ga-akarị okpukpu anọ n’ubi.
Ndị nnyocha ahụ mere ka o doo anya na atụmatụ ndị a kwekọrọ na ọnọdụ dị ala ma ghọta na e nwere ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ngụkọta oge, dị ka nnukwu ọdịda nke ikuku gas na-ekpo ọkụ n'ime ikuku ma ọ bụ nkwụsị na uto nke obodo.
Ọnọdụ kachasị njọ maka oke ebili mmiri ga-abụ mmụba na njikere ọkwa ruo ogo 10 ma ga - adịgide ruo ụbọchị 25 n'oge ọkọchị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-ebelata ikuku anwuru gas, ọ ga-adị ka nke ugbu a.
Na ihe a niile, a na-anwa ịkọwa maka mkpa dị maka obodo maka ịhazigharị usoro na njikwa ha dabere na mgbanwe ihu igwe. Iji maa atụ, iji obodo kwụ ọtọ, na-ebelata ikuku anwuru ma ọ bụ iji akụrụngwa na-emetọ ikuku. Ha bụ ntuziaka iji belata mmetụta nke ebili ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Mgbanwe ihu igwe ga-emetụta obodo karịa obodo